Midowga Musharixiinta oo ku dhawaaqay in an laga hor-istaagi karin banaanbaxa - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo ku dhawaaqay in an laga hor-istaagi karin banaanbaxa
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa markale ku celiyay inay qabanayaan banaanbaxa ay horay u iclaamiyeen in uu dhacayo maalinta Jimcaha ah ee todobaadkan xilli dowladda Soomaaliya ay shalay mamnuucday in la qabto banaanbax.
Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in sinaba aysan u baajin doonin mudaharaakooda Nabadeed ee jimcaha.
Waxaa uu sheegay in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu isku dayayo in uu isbaaro u digt banaanbaxa, hayeeshee aysan u joojin dono isbaaro iyo argagaxiso.
“ Waxaan rabaa in laga wantoobo in isbaaro loo dhigto mudaharaadka, waan ognahay culeys ayuu leeyahay laakin haadan yeelno waan gumoobeeynaa, waxaana rabnaa in aan dadka barno yeel oo sharci darro ah maya oo sharci ah inay ka horgeeyaan ayuu yiri” Musharax Daahir Geelle.
Warkaan kasoo baxay Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa kusoo aadaya xilli weli dowladda Soomaaliya ay sheegeyso in marnaba aysan ogoleyn in banaanbax la qabto, waxaana dadka Soomaaliyeed ay isha ku hayaan wixii dhici doona.
Previous articleDowladda Soomaliya oo joojisay qabashada codsiyada Cusub ee baasaboorka
Next articlePuntland oo mamnuucday banaannaxyada si lamid ah dowladda